GADOOD: Afar Ciyaartoy Oo Muhiim Ka Ah Real Madrid Oo Madaxweyne Perez U Sheegay Inay Iska Tegi Doonaan Haddii Jose Mourinho Yimaaddo – Latest Sports News
GADOOD: Afar Ciyaartoy Oo Muhiim Ka Ah Real Madrid Oo Madaxweyne Perez U Sheegay Inay Iska Tegi Doonaan Haddii Jose Mourinho Yimaaddo
Afar ka tirsan ciyaaryahannada ugu waaweyn Real Madrid ayaa si cad uga hor yimid qorshaha madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez uu ku doonayo inuu dib ugu soo celiyo kooxda tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho.
Real Madrid oo hal usbuuc laga cidhib-tiray Champions League iyo Copa del Rey, sidoo kalena 12 dhibcood ka dambaysa Barcelona oo hoggaanka horyaalka LaLiga haysa ayaa waxay raadinaysaa tababare ay ku beddesho Santiago Solari oo la filayo in shaqada laga caydhiyo.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, afar ciyaartoy oo muhiim ka ah Real Madrid ayaa isku arka in ay dibedda uga bixi doonaan naadiga haddii uu Jose Mourinho kusoo laabto, waxaanay si cad ugu wargeliyeen Florentino Perez in aanay raali ka ahayn in macallinka reer Portugal uu soo laabto.
Afartan ciyaartoy oo kala ah Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema iyo Marcelo ayaa walaacooda la wadaagay Perez, waxaanay ugu hanjabeen inay iska bixi doonaan.
Sida uu wargeysku qoray, Madaxweyne Perez ayaa u sheegay in cabashadooda iyo walaacoodu aanay saamayn ku yeelan doonin go’aankiisa iyo cidda uu magacaabayo, taas oo ka dhigan inay filan karaan ninka ay kasii cabaadayaan.
Arrintan ayaa waxay kusoo beegantay maalin kaddib markii ay xarunta tababarka isku khilaafeen Sergio Ramos iyo Marcelo oo hadallo kulul isweydaarsaday, iyadoo horena ay iskugu dhaceen madaxweyne Perez iyo Ramos.